एफिल टावरको टिकट | यात्रा समाचार
La एफिल टवर यो पेरिसको पर्यटन क्लासिक हो। फ्रान्सेली राजधानीको भ्रमण गर्न र यस शताब्दीको मोडको प्रतीकात्मक यस भवनमा चढ्न लगभग असम्भव छ, तर वास्तवमा त्यहाँ प्रायः धेरै मानिसहरू छन्।
के तपाइँ पेरिस जाँदै हुनुहुन्छ? के तपाईं प्रसिद्ध टावर जान्न चाहानुहुन्छ? त्यसपछि यो देखाउनुहोस् एफिल टावर र यसको टिकटको बारेमा जानकारी, कसरी उनीहरूलाई खरीद गर्ने, उनीहरूको लागत कति छ, कस्तो प्रकारको टिकटहरू छन्। सबै यहाँ।
1 एफिल टावर
2 एफिल टावरको लागि टिकटहरू
सर्वप्रथम पहिलो, टावरको संक्षिप्त सिंहावलोकन। यो १ th औं शताब्दीको अन्तमा निर्माण गरिएको थियो, यसैले मैले माथि भने कि यो शताब्दीको पालोको प्रतीक हो। निर्माण लगभग दुई बर्ष लाग्यो किनभने सन्‌ १1889 International International अन्तर्राष्ट्रिय विश्व मेलाको लागि तयार हुनुपर्ने थियो.
यो डिजाईन र नेतृत्वमा फ्रान्सेली कम्पनीले बनाएको हो गुस्ताभ एफिल, यसैले यसको नाम हो, र त्यस समयमा यसको डिजाइन धेरैका लागि राक्षसी थियो। पेरिसको सुरम्य र रमणीय छानामा कालो फलामको विशाल स्तम्भ! एक भयावह! यस्तो देखिन्छ कि एफिल न्यू योर्क शहरको ल्याट्टिंग वेधशालाबाट प्रेरित थिए र केही साधारण मध्यम डिजाइन पछि अन्तिम डिजाइनले आकार लिए र उनले यसलाई कसरी बनाउने भनेर सोच्न थाले।
निर्माण आधिकारिक रूपमा १ 1887 मा शुरू भयो र मार्च 31१ मा खोलियो। यो संग बनेको छ फिक्का गरिएको फलाम, र सम्पूर्ण निर्माण तौल १० हजार एक सय टन छ। प्रत्येक सात बर्षमा यसले नयाँ र paint लगाउँदछ, करीव 60० टन, किनकि तपाईले ख्याल गर्नु पर्छ कि यो खिया लाग्दैन। टावर यो 324२XNUMX मीटर छ यद्यपि यससँग १ 50 .० को पछिल्लो समय हो जब यसमा ट्रान्समिटि an एन्टेना राखिएको थियो।
मूल लिफ्टहरू पाँच थिए र ती हाइड्रोलिक थिए तर आज त्यहाँ सात छन्, विद्युतीय, कार्गो र हाइड्रोलिक बीच। न त यसको प्रकाश नै मूल हो। सुरुमा तिनीहरू ग्यास लाइटहरू थिए यद्यपि तिनीहरूलाई चाँडै विद्युतीय बत्तीहरूले प्रतिस्थापन गर्‍यो र हालसालै फ्ल्यास लाइटहरू थप गरियो जसले बत्तीहरूको खेलहरू अनुमति दिन्छ।
आज टावरमा पाँचवटा रेस्टुरेन्टहरू छन्। पहिलो तलामा फ्रान्सेली खानाको लागि टूर एफिल 58 हो। यो गुस्तावे एफिल कोठामा भुईँ साझा गर्दछ र दोस्रो स्तरमा ग जुल्मेन्ट खानाको साथ ले जुल्स भेर्न भोजनालय हो।
त्यहाँ तीन भोजन कोठा र तेस्रो तलामा शैम्पेन बारको साथ टूर एफिल बुफे पनि छ। अन्य सुविधाहरू जोडिएका छन् जस्तै केही बेसमेन्टहरू र माथिल्लो भागमा एफिलका लागि आरक्षित कोठा जुन आज १ th औं शताब्दीमा सजाइएको छ।
टावर पेरिसमा सब भन्दा पर्यटक चीज हो त्यसैले भाग्यमा यो एक छ सुपर पूर्ण वेबसाइट र धेरै भाषाहरूमा उपलब्ध छन्, स्प्यानिश समावेश त्यसो भए, टिकट अग्रिम किन्नुहोस् यदि तपाईं हराउन चाहनुहुन्न भने।
जनवरी १ 14, २०१ 2019 को दरहरू परिवर्तन हुन्छन् र यो भनिन्छ कि ती दुबै अनलाइन साइट र बक्स अफिसमा एक समान छन्। त्यो हो, तपाईं अनलाइन खरीद गरिरहेको पैसा बचत गर्दै हुनुहुन्न तर सायद समय। त्यहाँ छन् पर्यटकको उमेर र गन्तव्य र आरोहण मोडको आधारमा फरक दरहरू.
यसैले, दर वयस्क दर, युवा दर, बच्चा / अक्षमता दर र चार बर्ष भन्दा मुनिका बच्चाहरूको लागि दरमा विभाजित हुन्छन्।
तपाईले विचार गर्नुपर्छ कि तपाईं सीढीबाट वा लिफ्टबाट, दोस्रो तलामा वा माथि वा दुबै गन्तव्यहरूमा जानुहुन्छ। क) हो, यो वर्षको वर्तमान दरहरू यही हो:
दोस्रो तलामा एलिभेटर टिकट: प्रति वयस्क १ 16० युरो छ, प्रति युवा 30, १० युरो, प्रति बच्चा वा अशक्त 8, १० युरो र मुनि निःशुल्क छ।
दोस्रो तलामा सीढीका लागि टिकट: प्रति वयस्क १०, २० युरो, प्रति युवा 10, १० युरो छ, प्रति बच्चा वा अपा .्ग २, 20० युरो हो र नाबालिगहरूको लागि यो निःशुल्क हो।
एलिभेटर टिकट शीर्षमा: प्रति वयस्कको दर २ 25. e० युरो हुन्छ, प्रति युवा १२.50० युरो, प्रति बच्चा वा अशक्त e.12० युरो र अझै नाबालिगका लागि नि: शुल्क हुन्छ।
सिढी + एलिभेटरको लागि शीर्षसम्मको टिकट: प्रति वयस्क १। .19० युरो छ, प्रति युवा 40. .9० युरो, प्रति बच्चा वा अपा .्ग 70..4 ० युरो हो र नाबालिगहरूले भुक्तान गर्दैनन्।
दोस्रो तलामा जाने लिफ्ट टिकटले तपाईंलाई लिफ्टलाई दोस्रो तलामा जान अनुमति दिन्छ, एउटा माथि जुन तपाईंलाई माथि जान्छ दुईवटा एलिभेटरहरू प्रयोग गरेर माथिको माथि जान अनुमति दिन्छ; सीढिबाट दोस्रो तलासम्मको टिकटले तपाईंलाई भairs्या only मात्र प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ र माथिल्लो एलिभेटरको लागि एउटा तपाईंलाई माथिको दोस्रो तलामा र त्यहाँबाट एलिभेटरको सबै चीजको शीर्षमा उपयोग गर्न दिन्छ।
जबकि यदि तपाईं खरीद अनलाइन गर्नुभयो भने मूल्यहरू फरक हुँदैनन् हो तपाईं समय बचत गर्दै हुनुहुन्छ, यद्यपि तपाईंलाई थाँहा हुन्छ कि सीढी टिकट + लिफ्ट शीर्षमा पुग्छ वा दोस्रो तलामा सीढी टिकट। ती केवल बक्स अफिसमा बेचिन्छन्। बाँकी, हो अनलाइन, र सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो खरीद 60० दिन अग्रिममा र समान दिनको तीन घण्टा सम्म गर्न सकिन्छ।
अनलाइन खरीद गर्नका लागि तपाई केवल वेबसाइट भ्रमण गर्नुहुन्छ र तपाईले एक प्रकारको टिकट र मिति छान्नु पर्छ। तपाईंले आगन्तुकहरूको संख्या पनि संकेत गर्नुपर्दछ र त्यो हो।
स्मारक बर्षको हरेक दिन खोल्नुहोस् यद्यपि यस समयमा शिखर सम्मेलन केही कामका लागि जनवरी7र फेब्रुअरी १ ​​बीच बन्द रहनेछ। जुन २१ र सेप्टेम्बर २ बीचमा, लिफ्ट बिहान 1 देखि बेलुकी १२::21 p सम्म खुल्छ, अन्तिम एक बिहान ११:०० बजे जान्छ। भर्या। उही तालिकामा भेटिन्छ। वर्षको बाँकी भाग लिफ्ट आधा घन्टा पछि खुल्छ र एक घण्टा अघि बन्द हुन्छ र सीढीहरू उही समयमा खुला हुन्छ तर साँझ :2: .० सम्म बन्द हुन्छ।
अन्तमा तपाइँले यो जान्नुपर्दछ तपाईं ठुलो ब्याकप्याक्स वा सामानको साथ टावर भ्रमण गर्न सक्नुहुन्न र त्यो त्यहाँ कुनै लाकर छैन वा लकरहरू जहाँ ब्यागहरू छोड्ने, त्यसैले हल्का रूपमा जानुहोस्। साथै, यदि त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् भने, यो हुन सक्दछ कि टावरमा केहि खाली ठाउँहरू सूचना बिना नै बन्द गरिएको छ वा तपाईंको पर्स वा ब्याकप्याक खोजी गर्न सकिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » पेरिस » एफिल टावरको लागि टिकटहरू